अन्तत: ओली-प्रचण्डले शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई बनाए मन्त्री, हेर्नुहोस कुन मन्त्रालय दिए ? कहिले छ सपथ — Sanchar Kendra
अन्तत: ओली-प्रचण्डले शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई बनाए मन्त्री, हेर्नुहोस कुन मन्त्रालय दिए ? कहिले छ सपथ
काठमाडौं । पूर्वउपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बन्ने भएकी छिन् । यसअघि उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजीनामा दिएपछि कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई दिएको थियो ।
तुम्बाहाङ्फेले सोमबार दिउँसो साढे ३ बजे राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सपथग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए । अग्‍नि सापकोटालाई सभामुख बन्ने बाटो खोलिदिनका लागि तुम्बाहाङ्फेले माघ ६ गते उपसभामुखबाट राजीनामा दिइएकी थिइन् । लामो समयसम्म प्रतिनिधि सभाको सर्वोच्च पद रिक्त हुने भन्दै उनले राजीनामा नदिने अडान राख्दै आएकी थिइन् ।
उनलाई माघ १४ गते बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको थियो । पार्टी एकीकरणअघि तुम्बाहाङ्फे तत्कालीन नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य थिइन् । शिवमायाले उपसभामुखबाट राजिनामा दिन नमानेपछि नेकपा अध्यक्ष द्वोय केपी ओली र प्रचण्डले उनलाई उचित पद दिने घोषणा गरेका थिए । शिवमायाले मन्त्रालय मागेपछि उनलाई मन्त्री बनाइएको नेकपाका एक नेताले बताए ।